Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0113 lar
Ny adin'Andriamanitra amin'ny Isiraely
Alarobia 03 Apr.
Maneho an’Andriamanitra miampanga ny Isiraely na manana ady araka ny lalàna (rîb amin’ny teny Hebreo) ifanolanany amin’ny Isiraely ny Hôseà 4:1–3. Meloka eo anatrehan’Andriamaniny ilay firenena voafidy satria tsy niaina araka ny fanekena nifanaovana ny vahoaka. Fahamarinana, famindrampo ary fahalalana an’ Andriamanitra no toetra notakina tamin’ny Isiraely tao anatin’izany fifandraisana tsy nanam-paharoa tamin’Andriamanitra izany. Araka ny voalaza ao amin’ny Hôseà 2:20-22, ireo dia fanomezana arotsak’Andriamanitra ho an’ny olony ao anatin’ilay fanekena vaovao.
Noho ny amin’ny ota anefa, tsy hita taratra teo amin’ny fiainan’ny Isiraely ireo fanomezam-pahasoavana ireo. Ireo heloka bevava notanisain’i Hôseà dia nitondra ny firenena ho eo am-bavahadin’ny korontana sy ny fanjakanibaroa. Na ny mpitondra fivavahana, na ny mpisorona, eny fa na ny mpaminany koa aza dia samy tompon’andraikitra tamin’izao fitotonganan’ny fiainan’ny Isiraely izao ary dia samy hadinina ny amin’izany avokoa izy ireo. Adidy mavesatra no nitambesatra tamin’izy ireo. Raha toa ka tsy manohitra ireo fanararaotana ireo ary tsy manameloka ireo fihetsika tsy rariny ireo izy ireo, dia homelohin’Andriamanitra ihany koa.
Ny fiankohofana amin’ny sampy no noheverina ho fahotana maharikoriko indrindra ao amin’ny Testamenta Taloha, satria fandavana tanteraka ny anjara asan’i Jehôvah Andriamanitra teo amin’ny fiainan’ny firenena sy teo amin’ny fiainan’ny isam-batan’olona izany. Noho ny toetr’andro maina teo amin’ny tanin’ny Isiraely dia tena iankinan’aina tokoa ny orana any. Nanjary nino ny Isiraelita fa ireo fitahina azon’izy ireo, tahaka ny orana manome aina, dia avy tamin’ny Bala. Noho izany dia nanangana alitara ho an’ireo andriamani-kafa izy ireo ka nanomboka nampifangaro ny fahavetavetana tamin’ny fivavahana.
Tetsy andanin’izany, nitombo ny tsy rariny teo amin’ny fiaraha-monina. Nitsentsitra ireo tantsaha ny mpanan-karena mba hahazoany mandoa ny hetra tamin’i Asiria. Niroboka tamin’ny halatra sy ny hosoka ary ny lainga ny maro (Hôs. 12:8, 9). Tahaka izany no niovan’ilay vanim-potoana nandry fehizay sy nisian’ny firoboroboana teo aloha ho vanim-potoan’ny savorovoro ara-pôlitika sy ara-piaraha-monina. Teo amoron-tevan’ny fikorontanana ambony ambany tanteraka ny firenena.
“E ireo mpanan-karena mahantra, izay milaza fa manompo an’Andriamanitra, mahonena izy ireo. Milaza fa mahalala an’Andriamanitra izy ireo, kanefa amin’ny asa ataony dia mandà Azy tanteraka izy ireo. Akory ny hatevin’ny haizina toy izany! Milaza fa mino ny fahamarinana izy ireo, kanefa tsy mifanaraka amin’izany finoany izany ny asany. Manjary tia tena, mila voatsiary ary mpanjakazaka ny olona rehefa fatra-pitia harena. Hery ny harena; ary matetika ny fitiavana izany dia manimba sy manaisotra ny hatsarana sy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra ao anatin’ny olombelona.” — Testimonies for the Church, EGW, b. 2, t. 682.
Vakio ny Jak 5:1–7. Ahoana no ifanarahan’ireo teny ireo amin’ny fahamarinana ankehitriny ambaran’ny hafatry ny anjely telo ao amin’ny Apôk.14:6–12? Na manao ahoana na manao ahoana ny fidiram-bolantsika, ahoana no iarovantsika tena amin’ireo loza mety ateraky ny vola eo amin’ny mpanara-dia an’i Kristy?